कालापानीको विषयमा विवा’दास्पद अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल आउँदै…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
कालापानीको विषयमा विवा’दास्पद अभिव्यक्ति दिने भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल आउँदै…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : भारतका सेना प्रमुखले यही कात्तिक महिनामा नेपालको भ्रमण गर्न सक्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले भारतका सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेकोलाई नेपाल भ्रमणको लागि औपचारिक पत्र पठाउन लागेको जनाएको छ ।
नरभानेको नेपाल भ्रमण कात्तिक महिना भित्रै गराउनेगरी पत्र पठाईने नेपाली सेनाको जंगीअ’ड्डाले बतायो । पत्र पठाउनुअघि भारतीय पक्षसँग नेपाली सेनाले चाडै अनौ’पचारिक छलफल गर्न लागेको बताइएको छ । बिगत झै नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान
दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिन भारतका सेनाध्यक्ष नरभानेलाई नेपाल बोलाउन लागिएको हो । यसअघि नै नेपाल भ्रमण हुनुपर्नेमा को’रोना महामा’री र नेपाल भारत सीमा बिवादका कारण रोकिएको थियो । तर नरभानेको नेपाल भ्रमणलाई बिषेष प्रथामिकता दिएर सबै काम अघि बढाईने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
नरभानेले नेपाल भारत सीमा बिवाद रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रका बिषयमा विवा’दास्पद अभिव्यक्ति दिए पनि उनको दुबै देशमा चर्को आलोचना भएको थियो । उनले सो बिवा’दास्पद क्षेत्रलाई इंगित गर्दै नेपालले अरुको इसारामा लिपुलेकको मु’द्दा उचालेको आरो’प लगाएपछि
नेपालको उच्चतहबाट नै उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाइएको थियो । त्यसपछि मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने प्रचलन नै रोक्न सरकारलाई जनस्तरबाट दवाब समेत परेको थियो । पछि नरभानेले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउँदै नेपालप्रति नरम भाषा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
यद्धपि यसअघि २०७६ माघ २० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नरभानेको भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको थियो ।त्यस्तै नेपालका तर्फबाट प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७५ पुस २९ पुस गते नै भारतको भ्रमण गरेर मानार्थ सेनापतिको सम्मान लिइसकेका छन् ।
त्यस्तै २०७६ माघ २० कै मन्त्रिपरिषद बैठकले इजरायलका सेना प्रमुख अभी जोकोभिचको नेपाल भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । नरभाने नेपाल आउने सम्भावना उच्च भएपनि उनले गर्ने राजनीतिक भेट बारे टुंगो लागिनसकेको पनि बताइएको छ ।
Prevकृष्णबहादुर महरा भन्नुहुन्छ : MCC नेपालका लागि आत्मघा’ती छ, सबैले बहि’ष्कारको गरौं…सहमत हुनेले मात्रै सेयर गर्नुहोस् ।
Nextनेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठलाई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको चेतावनी, ‘जस्केलाबाट छिर्नेहरूले सत्ताको तुजुक नदेखाऊ…हेर्नुहोस् ।
कोरोनाविरुद्ध खोपको दोस्रो डोज वैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म दिइने
जसपा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादवले बाजी मार्लान् कि महन्थ ठाकुरले ?
नेता प्रकाशमान सिंह भन्नुहुन्छ : खातामा दशैंभत्ता पठाएर सरकारले सांसदहरुलाई जनताको नजरमा बदनाम गर्ने खोज्यो !
कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै , पुन नियुक्ति हुन पर्छ भन्ने रमा ओलिको माग, सहमती हुनेले सक्दो शेयर गरौ!